सर्वोच्चले भन्यो- आन्दोलनमा घातक बल प्रयोग नगर्नू
२९ भदौ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मधेसमा भइरहेको आन्दोलनमा घातक बल प्रयोग नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ । विस्मिलाह खातुनलगायतले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश बैद्यनाथ उपाध्याय र दीपकराज जोशीको इजलासले राज्यले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न कानून बमोजिम आवश्यक कदम चाल्ने ठहर गरेको छ । तर, रिट निवेदकले दाबी गरे जस्तो रसायनिक पदार्थ...
थारु जाति विहारमा शरण लिन जाँदैनन् : राजकुमार लेखी
थारु आन्दोलनकारीले संविधानसभाबाट जारी हुन लागेको संविधानलाई आंशिकरुपमा स्वागत गर्ने भएका छन् । मधेसवादी आन्दोलनकारीले संविधान अस्वीकार गर्ने चेतावनी दिइरहेका बेला थारुहरुले भने संविधानलाई स्वीकार गर्दै थप अधिकारका लागि संघर्ष गर्ने भएका छन् ।...
जिम्मेवारी पूरा गरेर सेना ब्यारेकमा फर्किन्छ : जंगी अड्डा
२९ भदौ, काठमाडौं । दङ्गाग्रस्त क्षेत्रमा स्थानीय प्रशासनको सहयोगका निमित्त खटिएको जनाउँदै नेपाली सेनाले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा हुनासाथ ब्यारेकमा फर्कने जनाएको छ । मंगलबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै जंगीअड्डाले भनेको छ- ‘स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को परिधिभित्र रही आम नागरिकको जीउ धन, सार्वजनिक एवम् सरकारी सम्पत्तिको सुरक्षाको साथै सामाजिक सद्भाव कायम राख्न निष्पक्ष,...
२९ भदौ, काठमाडौं । असोज ३ गते संविधान जारी गर्ने तयारीमा रहेको संविधानसभा र पद लम्ब्याउने दाऊमा रहेको शीतलनिवास एकाएक द्वन्द्व सुरु भएको छ । संविधान जारी गर्ने अन्तिम घडीमा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले नकारात्मक चलखेल गर्न थालेपछि मंगलबार संविधानसभाले शीतलनिवासलाई ठाडो चुनौती दिँदै संविधान जारी गर्ने मिति सर्वसम्मत घोषणा गरेको छ । विभिन्न...
२९ भदौ, काठमाडौं । तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा)का सहमहामन्त्री जितेन्द्र सोनल र केन्द्रीय सदस्य नवलकिशोर सिंहलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । विहान कपडा उद्योग लगायतमा भएको आगजनीमा संलग्न भएको अरोपमा प्रहरीले सोनल र सिंहलाई नितनपुरबाट पक्राउ गरेको हो । इन्स्पेक्टर पुरुषोतम खड्काले अनलाइनखबरसँग भने-‘लिप्नेमाल ८ मा भएको कपडा उद्योग तोडफोडमा संलग्न भएको अभियोगमा पक्राउ...
२९ भदौ, काठमाडौं । आगामी असोज १० गतेभित्र मुलुकले नयाँ प्रधानमन्त्री पाउने भएको छ । कात्तिक ३ गतेभित्र वर्तमान राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको विदाइ र नयाँ राष्ट्रपति पनि चयन हुनेछ । संविधानसभाले असोज ३ गते साँझ ५ बजे संविधान घोषणा गर्ने समय तय गरेको छ । यससँगै सभामुखदेखि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको पनि निर्वाचनको प्रारम्भिक...
तीजमा माइत जान नपाएका सभासद संविधानसभामै नाचे
२९ भदौ, काठमाडौं । संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले महिला सभासदहरुलाई संविधानसभामै दर खुवाएका छन् । तीजको दर खाने दिन संविधानका धाराहरु पारित गर्न व्यस्त भएका कारण माइत जान नपाएका सभासदका लागि नेम्वाङ आफैं माइती बनेका हुन् । संविधानसभा सचिवलायको तर्फबाट मंगलबार बेलुका ब्रेकको समयमा दरको व्यवस्था गरिएको हो । दरमा खीर, तरकारी, फलफूल र...
‘हाम्रा अधिकार नसमेटिएको संविधान मान्दैनौ’
२९ भदौ नेपालगन्ज । संयुक्त थरुहट मधेश संघर्ष समिति बाँकेले आफ्नो अधिकार र माग नसमेटि जारी गरेको संविधान कुनै हालतमा नमान्ने बताएका छन् । नेपालगन्जको पुरैनीमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागीहरुले संविधानको विरोध जनाउनको लागि पत्येक घर-घरमा कालो झण्डा राख्न पनि आव्हान गरेका छन् ।...
२९ भदौ, रौतहट । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा रौतहटका कार्यकर्ताले गौरमा आज मुखमा कालो पटी बाँधेर प्रदर्शन गरेका छन् । मधेसी मोर्चासँग आबद्ध पाँच जना नेतालाई रौतहट प्रहरीले पक्राउ गरेको विरोधमा प्रदर्शन भएको हो । उनीहरुले प्रदर्शनलाई 'राज्यको दमनविरुद्ध जेल भरौं अभियान' नाम दिएका छन् ।...
कार्यकारी राष्ट्रपतिको प्रस्ताव अस्वीकृत
२९ भदौ, काठमाडौं । संविधानसभाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको छ । संविधानको परिर्माजित विधयेकको धारा ६२ मा संशोधन राख्दै नेमकिपाका सभासद डिल्लीप्रसाद काफ्ले र अर्का सभासद श्याम श्रेष्ठले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको प्रस्ताव गरेका थिए । तर, संविधानसभाको सोमबारको बैठकले दुबैको प्रस्ताव बहुमतले काफ्लेको प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको छ । एमाओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित...
संविधान जारी हुन लागेकोमा भारतको साबधानीपूर्वक स्वागत र समर्थन
२९ भदौ, काठमाडौं । भारतले नेपालको नयाँ संविधान जारी हुन लागेकोमा सावधानीपूर्व स्वागत गरेको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयले सोमबार राति अबेर विज्ञप्ति जारी गरी संविधान निर्माण प्रक्रियामा भएको प्रगतिको स्वागत गरेको हो । साथसाथै भारतले नयाँ संवधान मुलुकका सबै क्षेत्र,भाग र समाजले ग्रहण गर्न सक्ने तथा उनीहरुको अपेक्षा पूरा गर्ने होस भन्ने चाहना...
जनकपुरमा मारिएका तीन जनालाई सहिद घोषणा गर्न सिफरिस
२९ भदौ, जनकपुर । आन्दोलनका क्रममा जनकपुरमा प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएका तीन जनालाई सहिद घोषणा गर्न सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ । यससँगै मृतकको शव बुझ्न र अन्तिम संस्कार गर्न आन्दोलनकारी सहमत भएका छन् । आइतबार राति अबेर सहमति भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसााद काफ्लेले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए । उनले भने-‘परिवारलाई आर्थिक सहायता,...
« अघिल्ला 1 … 1,433 1,434 1,435 1,436 1,437 … 1,974 पछिल्ला »
गर्भनिरोधक चक्की लिन भुलेमा के गर्ने ?
एसिडिटीः किन, कसलाई र कसरी हुन्छ ?
देवेन्द्र पौडेल नेतृत्वको समूह माओवादी केन्द्रमा प्रवेश
मोदीको तयारीः चुनावमा सहयोग गर्ने, दोक्लाममा समर्थन माग्ने